Meksika: Manoratra Avy Ao Am-ponja · Global Voices teny Malagasy
Meksika: Manoratra Avy Ao Am-ponja
Voadika ny 01 Oktobra 2012 11:09 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Italiano, Swahili, srpski, اردو, Deutsch, Dansk, 日本語, русский, Français, عربي, English
Mpanoratra Meksikana mety tsy tadidinao intsony i Enrique Aranda Ochoa. Nosamborina tamin’ny taona 1997 i Enrique ary voaheloka 50 taona an-tranomaizina ho nanao fakàna an-keriny. Na dia izany aza, tsy nanakana ity psykôlôgy (manam-pahaizana momba ny toe-tsaina) malaza tsy hanohy ny fitiavany ny literatiora ny fidirany am-ponja.
Loka maro amin’ny literatiora no efa azon’i Enrique ary efa nanoratra tantara foronina miisa enina ihany koa izy. Mifantoka amin’ny misiterin’ny Mayans ny boky nosoratany ao amin'ny “El fin de los dias” (Ny farandro) [es] ankehitriny, izay azo vidiana amin’ny alalan’ny aterineto.
Bilaogera, Gabriela Gutierrez M. ao amin’ny Animal Político [es] nitantara ny zavatra ataon’ity mpanoratra ity any am-ponja:
Mailaka ny hiresaka, migororoana avy ao ambavany ny lohahevitra maro. Afaka miresaka momba ny masoandro izy ohatra, ary mety hofaranany amin’ny firesahana momba ny yoga, izay taranja nampianariny tany am-ponja. Tahaka ny mankany amin’ny trano famakiam-boky ny miresaka miaraka aminy, avy eo toy ny avy namaky boky maro ianao rehefa avy miresaka aminy. Ilay kiobàna Joaquin Maria Machado de Assis no nasainy hovakiana farany.
Sary via Shutterstock, copyright Steve Snowden
Notohizan’i Gabriela ihany ny lahatsoratra bilaoginy [es], ary nilaza ireo loka azon’i Enrique tamin’ny lahatsoratra vitany tany am-ponja:
Tao am-ponja, in-telo nandrombaka ny fifaninanam-pirenena amin'ny Tononkalo “Salvador Diaz Miron” avy amin’ny Conaculta-INBA i Enrique Aranda (ny taona 1998, 2001 ary 2008). Ary indroa nahazo ny Loka tamin'ny fifaninanana Sombin-tantara “José Revueltas” ihany koa izy, izay avy amin’ny INBa ihany (ny taona 2003 sy 2008). Ny INBA ihany koa no nanolotra ny fankasitrahana vao haingana tamin’ilay fifaninanana “Mexico lee 2011″, izay manolotra valisoa amin’ny ezaka fampiroboroboana ny famakianteny, sy ny vondrona mpamaky boky natsangany tao anatin’ny fonja. Ivon-toerana ara-kolontsaina ao an-tanànan’i Meksika izany, ny Minisiteran’ny Kolontsaina ankehitriny no mamatsy boky eo amin’ny 800 [ho an’ny klioba]: “Raha niantso azy ireo aho tamin’ny voalohany, noheveriko fa manampahefana no nandray ahy. Ary raha nilaza tamin’izy ireo aho fa olona migadra any am-ponja, talanjona izy ireo”, hoy izy. Ny antom-pisian’ity tetikasa ity dia ny hanomezana ireo gadra ” tapakila amin’ny fitetezana izao tontolo izao any ivelany izay kasain’izy ireo fatratra”.
Namoaka lahatsoratra momba azy ny tranonkalana gazetiboky Meksikana Proceso [es] izay nilaza fa tsy ara-dalàna ny fanenjehana azy ho nanao fakàna an-keriny:
Manahy hatrany i Enrique fa noho ny fanaovany politika amin’ny fifanakalozan-kevitra “forum” ho an’ny daholobe, sy ny firaisankinany amin’ny tranga sosialy, toy ny raharaha zapatista, ary noho ny fandraisany anjara amin’ny maha-mpikatroka manohitra ny NAFTA azy no antony nisamborana sy nanagadrana azy. Nanambara tahaka izany ihany koa ny Amnesty International tamin’ny tatitra navoakany ny taona 2003: Fitsarana tsy ara-drariny: fampijaliana ao amin’ny fitsarana (AI Index: AMR 41/007/2003/), namangy azy ny filohan’ny PEN CLUB, Eugene Schoulgin tamin’ny taona 2006; manohana izany ihany koa ireo Mpisolovavan’ny Komity Mpiaro ny Zon’olombelona, namoaka toro-lalàna 12/02 kosa ny Vaomieran'ny Mpiaro ny Zon’olombelona ao amin’ny Distrika Federaly (Tanànan’i Mexico) noho ny fampijaliana sy ny fanitsakitsahana ireo zony momba ny antoka ara-pitsarana.
Mieritreritra ny hitondra ny raharaha momba azy eo anatrehan’ny fitsarana Inter-Amerikana miaro ny Zon’olombelona i Enrique Aranda Ochoa.